74 ka ciyaar ee ugu wanaagsan taariikhda | I sii wakhti firaaqo
Hubaal inaad jeceshahay la wadaagida khibradaha qoyskaaga, lammaanahaaga ama asxaabtaada. Iyo waxa ka fiican ee dhiirigelinta shirarka, maalmaha roobaadka ama qabowga, ama xafladaha, marka loo eego in la haysto kulan guddiga ugu fiican abid. Waxaa jira iyaga dhammaan dhadhanka iyo da'da, dhammaan noocyada kala duwan ee qaybaha iyo mawduucyada. caajis? Macquul maaha! Waxaad wakhti fiican kula qaadan doontaa cinwaanadan aanu halkan ku talinayno.
Intaa waxa dheer, waxaanu idiinka tagaynaa ururinta ciyaaraha looxyada ee aanu daabacnay si aad u doorataan midka ku haboon waxaad raadinayso:
Ciyaaraha guddiga ugu fiican qoyska
Ciyaaraha looxa ugu fiican carruurta
Ciyaaraha looxa qolka baxsadka ugu fiican
1 Noocyada ciyaaraha looxa
1.1 Ciyaar kaligiis ah
1.1.1 Solitaire oo leh kaarar
1.1.3 Maaha bisad la'aanteed
1.1.5 Arkham Noir: Dilka Sixirka Cult
1.2.2 Jasiiradda mamnuuca ah
1.2.4 Argah argax
1.2.6 Guri waali ah
1.2.8 Zombicide iyo Zombie Kidz Evolution
1.2.9 Beerta Mysterium
1.2.10 Halyeeyadii Andor
1.3 Ciyaaraha looxa ee dadka waaweyn
1.4 Laba qof ama lammaane
1.4.1 Disset Tetris Dual
1.4.3 Bang! Duelka
1.4.4 Duo koodka sirta ah
1.4.6 7 yaabab Duel
1.5 Ciyaaraha guddiga ee carruurta
1.6 Ciyaaraha looxa ee qoyska
1.7 Ciyaaraha kaararka
1.7.1 Heshiiska Kali ahaanshaha
1.7.2 Ciyaarta Aboorka Khayaanada leh
1.7.3 Biyo-mareenka Dobble
1.8.1 Dices ka gudub
1.8.3 Cutubyo sheeko
1.8.4 Ciyaarta dharbaaxada
1.9.1 Mattel xoqin
1.9.5 Waddada khasnadda
1.9.6 In la raadiyo cobra boqortooyo
1.9.7 Loox banaan
1.10.3 Ciyaarta Checkers
1.10.4 Parcheesi iyo Game of the Goose
1.10.7 Ciyaaraha la soo ururiyay
1.11.1 Dabaqa Dragon Ball
1.11.3 Ciyaarta carshiyada ciyaarta guddiga
1.11.5 Waxyaalihii Dhintay ee Soconaya
1.11.6 Dhismaha Indiana Jones Tower
1.11.8 Xafladda & Shirkadda Disney
1.11.10 World Jacka
1.11.11 Casaarka maqaarka
1.11.12 Yaab qurux
1.11.14 Midka soo ifbaxaya
1.11.15 Harry Potter wax yar
1.11.16 Eebihii yaraa
1.12 Ciyaaraha guddiga istiraatiijiyadda
1.12.1 ERA qarniyadii dhexe
1.12.4 Stratego Asalka
1.12.5 Khatarta Caadiga ah
1.12.6 Disney xun
1.12.8 Daabcaaddii Qarniga ee Dagaalkii Wayn
1.12.9 Xusuusta 44
1.12.10 Imhotep: Dhismihii Masar
1.12.11 Magaalooyinka Classic
1.13 Online iyo bilaash
1.13.1 Goobaha ciyaaraha bilaashka ah
1.13.2 Apps ee aaladaha mobilada
2.1 Ciyaaraha guddiga Baxsashada Qolka
2.2 Ciyaaraha Doorka
3 Sida loo doorto ciyaarta guddiga ugu fiican
Noocyada ciyaaraha looxa
Kuwani waa qaybaha leh ciyaaraha guddiga ugu fiican taariikhda, oo loo qaybiyay by qaybaha iyo mawduucyada. Iyaga ma jiraan wax cudur daar ah oo aan haysan waqtiyo madadaalo badan:
Ciyaar kaligiis ah
Kuwaas Keli iyo caajis, had iyo jeer ma yeelan kartid dhowr ciyaarood, ama mar walba diyaar uma aha inay ciyaaraan, markaa waxa fiican inaad hesho mid ka mid ah ciyaarahan ciyaartoyga ah:
Solitaire oo leh kaarar
Fournier - Dusha sare ...
Dusha sare ee kaararka, kaadhka ciyaarta,...
Sagxaddu kaliya kuma ogola inaad ku ciyaarto koox, waxaad sidoo kale abuuri kartaa kalinimadaada In qaabka ugu nadiifsan ee Windows, laakiin miiskaaga saaran, iyo sagxada aad dooratay, Faransiis ama Isbaanish. Ciyaar kugu mashquulinaysa oo buuxinaysa saacadaha aan shaqayn.
Iibso kaararka Isbaanishka Iibso kaadhadhka sagxada Faransiiska
Jimcadu waxay u baahan tahay hal ciyaaryahan oo kaliya, waana ciyaarta kaararka. Tacabur kali ah oo kaliya oo aad ku guuleysan karto ciyaarta. Ciyaartani waxa ay ku quusinaysaa sheeko ku saabsan Robinson, kaas oo markab ku burburay jasiiradaada, waana in uu kaa caawiyo la dagaalanka khataro badan iyo budhcad badeed.
Maaha bisad la'aanteed
Bisad Games Cocktail,...
Ciyaartan kale waxaa sidoo kale loogu talagalay hal ciyaaryahan, inkastoo ay ciyaari karaan ilaa 4. Way fududahay, waxaa lagu ciyaaraa kaararka. Hadafku waa in la hago bisad si ay u gaadho meel diiran oo wanaagsan oo ay uga baxdo wadada. Si kastaba ha ahaatee, ka gudubka mawjadda magaaladu ma fududaan doonto...
Iibso bisad la'aanteed
Ludilo- Ciyaarta Bandit ee...
Waa ciyaar turubka aad u fudud, xataa carruurta. Waxay ka ciyaari karaan min 1 ciyaartoy kaliya ilaa 4. Waana inaad hubisaa in tuug isku dayaya inuu baxsado aanu ka baxsanayn. Xarfaha ayaa xannibi doona dariiqa lagu qabanayo. Ciyaartu waxay dhamaan doontaa marka la xidho dhammaan ka bixista suurtogalka ah.
Soo iibso burcad
Arkham Noir: Dilka Sixirka Cult
Ludonova - Arkham Noir:
Ciyaar ay dhiirigelisay sheekooyinka naxdinta leh ee HP Lovecraft. Waa cinwaan gaar ah oo loogu talagalay dadka waaweyn oo keligiis lagu ciyaaro. Marka la eego taariikhdeeda, waxaa soo baxday in dhowr arday oo ka tirsan jaamacadda Miskatonic la helay meydkooda. Ardaydani waxa ay baadhayeen mawduucyo la xidhiidha sixir, waana in aad ciyaartan kaadhadhka ah ku ogaataa asalka xaqiiqada.
Iibso Arkham Noir
Haddii aad rabto waa ruuxa korinta, Ka sokow horumarinta xirfadaha iskaashiga, maxaa ka wanaagsan ciyaaraha guddiga iskaashiga:
Ciyaar iskaashi oo ku habboon da' kasta, laga bilaabo 8 sano jir. Dhexdeeda waxaad u baahan doontaa inaad ku xalliso wax qarsoon, dhammaan ciyaartoyda ayaa wada guulaysan doona ama waayi doona. Hadafku waa in la ogaado runta ku saabsan dhimashada ruuxa wareegaya daarta la rafaadiyay. Markaas uun baa naftaadu ku nasan kartaa.
Jasiiradda mamnuuca ah
Devir-The Forbidden Island...
Qof kastaa waa inuu ka wada shaqeeyaa sidii loo soo celin lahaa waxyaabo qiimo leh oo laga keenay jasiirad dahsoon. Laakiin ma fududaan doonto, maadaama jasiiraddu ay sii quusayso wax yar. Qaado kabaha 4 tacaddiyeyaal aan cabsi lahayn oo ururi hantida muqadaska ah ka hor intaysan dhammaanin biyaha hoostooda lagu aasay.
Iibso Jasiiradda Reeban
Mercury - Ciyaarta ...
Ciyaar iskaashi oo ku habboon kooxaha kuna habboon qoyska oo dhan. Waxay ka ciyaari karaan min 2 ilaa 12 ciyaartoy. Waxay ka kooban tahay 176 kaarar oo kaa caawin doona inaad hesho boqolkiiba ugu sarreeya ee dahabka macdanta. Ciyaartoyda midkood waa qaswadayaasha, laakiin inta kale ma garanayaan cidda uu yahay. Hadafku waa in la helo dahab ka hor si uu u guuleysto.
Soo iibso Saboteur
Waxay ku salaysan tahay isla sheeko Arkham Noir, iyo isla goob. Laakiin kani waa daabacaaddii 3aad oo ay ku raran yihiin waxyaabo cusub, siro cusub, waalli iyo halaag badan, iyo shakhsiyaad badan oo shar leh oo isku dayi doona in ay hurdaan xumaanta. Laacibka ayaa noqon doona baaraha kaas oo isku dayi doona in uu iska ilaaliyo masiibadan ku soo fool leh aduunka isaga oo kaashanaya ciyaartoyda kale iyo tilmaamaha la bixiyo.
HABA 302387 Ciyaarta...
Waa ciyaar iskaashi oo loogu talagalay carruurta yaryar, laga bilaabo da'da afar jir, inkastoo dadka waaweyni ay sidoo kale ka qayb qaadan karaan. Hadafka kooxda baandada Haba Hamster waa inay gacan ka geystaan ​​ururinta dhammaan saadka cuntada lagama maarmaanka u ah jiilaalka. Dhammaan waxa ay saaran yihiin sabuurad leh dhammaan noocyada kala duwan ee tafaasiisha, sifooyin gaar ah (wheel, gaadhi, wiishka gacanta ...), iwm.
Guri waali ah
Guryaha guryaha ee...
Cinwaanka kale ee wada shaqaynta kaas oo kugu dhex gelinaya luuqyada abuurka iyo guryaha waaweyn ee Arkham. Waxaa jira siro iyo bahal laga naxo oo qarsoon. Qaar ka mid ah kuwa waalan iyo culimo-culus ayaa ku takri falaya gudaha dhismayaashan si ay ugu yeeraan Kuwii hore. Ciyaartoyda waa inay ka gudbaan dhammaan caqabadaha oo ay furfuraan qarsoodiga. Ma awoodi doonaan?
Iibso Qasriga Waalan
Ciyaaraha Z-man Spain
Magac ku habboon waayaha. Ciyaarta guddiga madadaalada ah oo ay xubnaha koox gaar ah oo ka hortagga cudurrada ay tahay inay la kulmaan 4 masiibo oo dilaa ah oo ku faafay adduunka oo dhan. Isku day inaad hesho dhammaan agabyada lagama maarmaanka ah si aad u habayn karto daawada oo aad u badbaadiso aadanaha. Wadajir kaliya ayaa...
Zombicide iyo Zombie Kidz Evolution
Scorpion Masqué- Zombie
Aakhirkii zombie ayaa yimid. Sidaa darteed, waa inaad u shaqeysaa koox ahaan si aad isu hubeyso oo aad u baabi'iso dhammaan kuwa aan dhimanin. Ciyaartoyga kastaa waxa uu qaataa doorka badbaadaha ee lagu hibeeyey awoodo gaar ah, markaa mid kastaa wuxuu yeelan doonaa doorkiisa. Sidan ayaad ula dagaalami doontaa horde cudurka qaba. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay nooca Kidz ee kuwa yaryar.
Soo iibso Zombicide Soo iibso nooca Kidz
Mysterium Park waa mid kale oo ka mid ah ciyaaraha guddiga iskaashiga ee ugu fiican halkaas oo aad naftaada ku dhex milmi karto carwo caadi ah, laakiin qarinaysa siraha mugdiga ah. Agaasimeheedii hore waa la waayay, baaritaanna ma gaarin wax gunaanad ah. Maalintaas wixii ka dambeeyay waxyaabihii la yaabka lahaa ma joogsan oo qaarkood waxay ku qanceen in ruuxooda uu meeshaas wareegayo...Ujeedadaadu waa in aad baadho oo aad xaqiiqada ogaataan oo 6 habeen uun baa kaa hadhay carwada magaalada.
Iibso Beerta Mysterium
Devir - Halyeeyada ...
Ku guulaysta abaal-marin, tani waa mid kale oo ka mid ah koobabyada iskaashatooyinka ugu fiican ee aad iibsan karto. Ciyaar uu sameeyay sawir-qaadaha caanka ah ee Michael Menzel oo ku geynaya boqortooyada Andor. Cadawga dhulkan ayaa ku sii wajahan qalcadda King Brandur. Ciyaartoyda ayaa soo galay kabaha geesiyaasha kuwaas oo wajihi doona isaga si ay u difaacaan qalcadda. Oo… iska ilaali masduulaagii.
Iibso Halyeeyada Andor
Ciyaaraha looxa ee dadka waaweyn
Dhallinta, xafladaha asxaabta, si ay u qaataan waqtiyada ugu yaabka badan kuwa aad danayso. Taasi waa waxa doorashadan ee cinwaannada ciyaarta dadka waaweyn ee ugu fiican loogu talagalay.
Eeg ciyaaraha looxa ugu fiican ee dadka waaweyn
Laba qof ama lammaane
Marka tirada ciyaartoyga laga dhigo laba kaliya, suurtogalnimada ma xaddidna. jira ciyaaro aan caadi ahayn oo loogu talagalay lammaane ciyaartoy. Qaar ka mid ah kuwa ugu wanaagsan waa:
Disset Tetris Dual
Cudurka - Tetris Dual, ...
Waa ciyaarta looxa oo u baahan in yar oo hordhac ah. Waxaad haysataa loox toosan oo qaybta sare ku leh dalool aad ka dhex tuurto qaybaha. Qayb kastaa waxay leedahay qaababka ciyaarta fiidyaha retro ee caanka ah, waana inaad ku habboonaato habka ugu fiican ee leexasho kasta.
Waa mid ka mid ah ciyaaraha guddida ee ugu iibinta fiican adduunka. Naqshaday 1987, way badbaaday ilaa maantadan la dayactiray. Waxaad haysataa loox lix geesood ah iyo xoogaa marmar ah. Ujeedadu waa in la tuuro looxa 6 marble ee ka soo horjeeda (14 ka ee uu dhigay).
Haddii aad jeceshahay reer galbeedka, markaa waxaad jeclaan doontaa ciyaarta turubka ee ku geyn doonta galbeedka fog iyo duurjoogta taas oo aad la kulmi doonto qofka kaa soo horjeeda. Sharci-daro ka soo horjeeda wakiillada sharciga, mid keliya ayaa baaqi kara, kan kalena wuxuu qaniini doonaa boodhka ...
Duo koodka sirta ah
Devir - Koodhka sirta ah
Waa ciyaar murugo iyo qarsoodi ah oo loogu talagalay qoyska oo dhan, oo u ciyaara laba-labo. Waa inaad noqotaa mid degdeg ah oo xariif ah, maadaama aad noqon doonto jaajuus ku xallin doona siraha adigoo tarjumaadda tilmaamo qarsoon. Qaarkood waxaa laga yaabaa inay noqdaan geedo guduudan, oo haddii aad kala saari weydo, cawaaqibka ayaa noqon doona mid aad u xun.
Iibso Koodhka sirta ah ee Duo
CIYAARAHA SD- Sheegashada, Midabka...
Boqorkii waa dhintay, laakiin sida ay wax u dhaceen cidna ma oga. Waxa uu ka soo muuqday foosto khamri ah oo hoos u dhacday. Dhaxaltooyo lama yaqaan. Taasi waa muuqaalka ay ciyaartu ku bilaabmato, oo ka kooban laba weji: kan ugu horreeya ee ciyaartoy kastaa wuxuu isticmaali doonaa kaararkiisa si uu u shaqaaleysiiyo taageerayaashiisa, marka labaadna taageerayaasha ayaa u dagaalami doona si ay u helaan aqlabiyadda. Qofkii hela codadka ugu badan ee kooxdooda ayaa guulaysan.
7 yaabab Duel
Si la mid ah qaabka abaal-marintu ku guulaysatay 7 Wonders, laakiin loogu talagalay 2 ciyaartoy. Barwaaqo oo garaac tartankaaga si aad ilbaxnimadaadu u waarto. Ciyaaryahan kastaa wuxuu hogaamiyaa ilbaxnimo, dhisidda dhismayaal (kaar kastaa wuxuu u taagan yahay dhismo) wuxuuna gacan ka geysan doonaa xoojinta ciidanka, ogaanta horumarka farsamada, kobcinta Boqortooyadaada, iwm. Waxaad ku guulaysan kartaa inaad ku guulaysato ciidan, saynis iyo sareyn shacab.
Iibso 7 Wonders Duel
Ciyaaraha guddiga ee carruurta
Hadaad leedahay carruurta guriga, Mid ka mid ah hadiyadaha ugu fiican ee aad siin karto waa mid ka mid ah ciyaarahan. Hab ay si sax ah u horumaraan, wax u bartaan, ugana fogaadaan shaashadaha muddo daqiiqado ah ...
Eeg ciyaaraha looxa ugu fiican ee carruurta
Ciyaaraha looxa ee qoyska
Kuwani waxay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee aad iibsan karto, tan iyo qof kastaa wuu ka qayb qaadan karaa, saaxiibada, carruurtaada, awoowahaa, awoowayaasha, waalidka ... Si gaar ah loogu talagalay kooxo waaweyn oo aad u xiiso badan.
Eeg ciyaaraha qoyska ugu fiican
Loogu talagalay taageerayaasha ciyaaraha kaararkaWaa kuwan qaar kale oo aan lagu darin qaybihii hore, oo ku salaysan sagxadaha:
Heshiiska Kali ahaanshaha
Kaadhadhka Ciyaarta Keligiis...
Waa ciyaarta Monopoly-ga caadiga ah, laakiin lagu ciyaaro kaarar. Ciyaaraha degdega ah ee xiisaha leh ee isticmaala kaadhadhka waxqabadka si ay u ururiyaan kirada, ganacsi u sameeyaan, u helaan hanti, iwm.
Iibso Deal monopoly
Ciyaarta Aboorka Khayaanada leh
Devir - Ciyaarta Aboor
Ciyaar turubka oo ka kooban qaybinta ciyaartoyda iyo kii ugu horeeyay ee ka dhamaada ayaa guulaysta. Si taas loo sameeyo, waa in ay tuurayaan kaar dhanba wareeg ah oo leh nambar isla markaaba ka sarreeya ama ka hooseeya kan miiska saaran. Waxa ugu wanagsan, si aad u guulaysato, waa inaad khiyaamaysaa...
Soo iibso aboor khiyaano badan
Asmodee - Doobble...
Ciyaar xawli ah, u fiirsi iyo falcelin, oo wata daraasiin kaarar ah oo aan biyuhu lahayn si aad sidoo kale ugu ciyaari karto barkadda xagaaga. Kaar kastaa waa mid gaar ah, wuxuuna leeyahay hal sawir oo keliya oo ay wadaagaan kuwa kale. Raadi calaamadaha isku midka ah, kor u dheh oo qaado ama tuur kaarka. Waxaad ciyaari kartaa ilaa 5 minigames oo kala duwan.
Haddii ciyaaraha looxa ama kaadhadhku ay yihiin kuwo caadi ah, sidoo kale ciyaaraha laadhuudu waa kuwo caadi ah. Waa kuwan qaar ka mid ah ciyaaraha laadhuu ugu amaanan
Dices ka gudub
Cayro - Iskutallaab Dices -...
Waxaad haysataa 14 laamood, 1 koob, galaas 1 saac ah, waana taas. Ciyaar rogrogmi karta si loo horumariyo fahamka dhegeysiga, dulqaadka, xirfadaha garashada. Kaliya waa inaad rogtaa laadhka oo aad samaysaa tirada ugu badan ee kelmado isku xidhan gudaha wakhtiga aad haysato. Dhibcahaaga qor oo ka badi kuwa kaa soo horjeeda.
Iibso Dices Cross
Koobka Laadhuuda 20...
Koob iyo laadhuu waa waxa kaliya ee aad u baahan tahay si aad u tartanto oo aad u ciyaarto. Waa ciyaar fudud, taas oo loo ciyaari karo si kasta oo aad door bidayso, laakiin aad si fudud u isticmaali karto in aad laadhuuga soo rogo oo aad aragto cidda tirooyinka ugu waaweyn soo rogaya, ama aad isku daydo in aad la mid noqoto isku-dhafka ka soo bixi lahaa.
Asmodee- Sheeko Cubes
Ma aha ciyaarta laadhuuda dhaqameed, laakiin waxaad haysataa 9 laamood oo leh waji kuwaas oo noqon kara jilayaal, goobo, walxo, shucuur, iwm. Fikradda ayaa ah in la rogo laadhuuda, oo waxay kuxirantahay waxaad la timid, uga sheekee maaddooyinkaas.
Iibso Sheeko Cubes
Ravensburger - Weerar...
Ciyaar qoyska oo dhan ama saaxiibada. Laadhuu sixir ah oo laadhuuda goobta si loo helo calaamado isku-dhafan oo lagu tuuro sixirka iyo sixirka. Marka ay ciyaartu socoto, ciyaartoygu waxa uu lumin doonaa laadhuu oo waxa uu dhamayn doonaa awoodooda. Qofkii marka hore laadhuu lumiya waa khasaaray.
Way fududahay in la barto, kor u qaado xirfadahaaga maskaxeed, ciyaaruhuna waa kuwo degdeg ah, maadaama aysan muhiim ahayn leexashada, qof kastaa wuu ka qaybqaataa. Si aad u dhaliso, waa inaad calaamadisaa tirooyinka ugu badan ee suurtogalka ah.
Kooxda kale ee ciyaaraha guddiga lama huraanka ah waa ciyaaraha looxa. Looxyadu kaliya maaha saldhigga ciyaarta, laakiin waxay ku siin karaan xaalad ciyaar aad u xiiso badan. Looxyada qaarkood waa fidsan yihiin, laakiin kuwa kale waa saddex-cabbir oo si fiican loo qabtay.
Scrabble waa mid ka mid ah ciyaaraha qadiimiga ah uguna xiisaha badan ee erayo lagu sameeyo. Waa inaad higgaadisaa oo aad ku xidhaa xarfo si aad u samaysato erayada 7da kaadh ee si aan kala sooc lahayn loo qaatay. Xaraf kastaa wuxuu leeyahay qiimo, markaa buundooyinka waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo lagu salaynayo qiyamkaas.
Ciyaaraha Qorshaha B PBG40020 ...
Ciyaarta looxa ayaa kaa dhigi doonta inaad soo saarto naftaada farsamayaqaanka ah, adoo abuuraya muraayado mosaic ah oo fantastik ah oo leh tiirarkeeda. Ujeedadu waa in la helo qurxinta ugu fiican ee boqortooyada Evora. Dhexdeeda, 2 ilaa 4 ciyaartoy ayaa ku ciyaari kara, waxayna ku habboon tahay da'da 8 iyo wixii ka weyn.
Tactic Touché Children iyo ...
Ciyaarta looxa taatikada ee qoyska oo dhan. Tarjumaadda ciyaarta turubka oo leh sagxad Isbaanish ah ayaa loo beddelay loox. Ma ku dhiirranaysaa inaad leexiso?
Ciyaarta Cefa - Ciyaarta Dracula
A classic laga soo bilaabo 80-meeyadii oo soo noqda. Ciyaar ay dhiirigelisay kaymaha Transylvania, ee degmooyinka qalcaddii Dracula. Ciidamada sharwadayaasha iyo kuwa wanaaga ayaa isku dhacay maadaama ay yihiin kuwii ugu horeeyay ee galay qalcadda. Yaa heli doona?
Cefa Toys- Ciyaarta looxa,...
Kuwo nostalgic ah ayaa hubaal ah inay xasuusan doonaan ciyaartan weli la iibinayo. Ciyaar madadaalo leh oo qoyska oo dhan ujeedadeedu tahay inay iibsadaan oo ay ku iibiyaan hantida ku teedsan badda Mediterranean qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad. Si wanaagsan u maamul hantidaada intaad ku dhex muquuranayso tacaburtan budhcad-badeednimada.
Iibso Waddada Khasnadda
In la raadiyo cobra boqortooyo
Cefa Toys- Ciyaarta Disney...
Ciyaar tacabur ah oo qoyska oo dhan ah oo u dhaxaysa fantastik iyo sixirka. Mid kale oo ka mid ah koobabkaas oo hore loo ciyaari jiray 80-meeyadii iyo in carruur badan oo xilligaasi ay hadda awoodi doonaan inay carruurtooda wax baraan.
Iibso Raadinta Boqortooyada Cobra
Chips, laadhuu, galaas saacad, kaarar, kaarar, roulette wheel, iyo looxa… Laakin dhammaan waa madhan! Fikradda ayaa ah in aad alifto ciyaarta looxa adiga kuu gaar ah. Xeerarka aad rabto, sida aad rabto, ku sawirida shamac cad, adoo isticmaalaya dhejisyo daabacan, iwm.
Way seegi kari waayeen ciyaaraha looxa classic, kuwa inagu dhex jiray qarniyo badan oo aan waligood ka bixin hab-dhaqanka. Kuwa ugu wanaagsan waa:
Qalabka StonKraft ee...
Loox alwaax ah oo cabbirkiisu yahay 31 × 31 cm, oo gacanta lagu xardhay. Shaqo farshaxan oo u adeegi karta sida walxaha qurxinta iyo inaad la ciyaarto ciyaaraha ugu fiican qof kasta oo aad rabto. Qaybuhu waxay leeyihiin gunta birlabaysan si aanay sahal uga dhicin looxa. Oo looxa waa la laalaabi karaa oo loo beddelaa sanduuq si ay u qabtaan dhammaan tiles.
Cordays - Kiiskii ...
Dominoes waxay u baahan yihiin hordhacyo yar. Waa mid ka mid ah ciyaaraha ugu da'da weyn taariikhda. Oo halkan waxaad haysataa mid ka mid ah ciyaaraha ugu fiican, oo leh kiis qaali ah iyo qaybo gacmeed. Intaa waxaa dheer, ma jirto hal hab oo kaliya oo lagu ciyaaro, laakiin waxaa jira dhowr nooc ...
30 × 30 cm looxa bjørk adag iyo 40 xabbo oo alwaax dhexroor 30 mm ah. Ku filan in la ciyaaro ciyaarta caadiga ah ee hubinta. Ciyaar fudud oo ku haboon in ka badan 6 sano.
Parcheesi iyo Game of the Goose
Kayro - Parchis iyo Oca...
Hal loox, laba weji, laba ciyaarood. Maqaalkani waxaad heli doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u ciyaarto ciyaarta caadiga ah ee Parcheesi, iyo sidoo kale ciyaarta goose haddii aad u jeediso. Waxaa ku jira 26.8 × 26.8 cm loox alwaax ah, 4 koobab, 4 laadhuu, iyo 16 calaamadood.
Iibso Parcheesi / Goose
Falomir- XXL ciyaarta Bingo
Bingo waa ciyaar qoyska oo dhan ah, waana mid ka mid ah kuwa casriga ah ee waqtiga oo dhan. Iyada oo durbaan si toos ah loo sii daayo kubbadaha oo leh lambarrada random si aad uga gudubto kaararka ilaa aad ka sameyso xariiq ama bingo. Iyo si kor loogu qaado tartanka, waxaad wax ku ridi kartaa...
Ciyaaraha - Jenga (Hasbro ...
Jenga waa ciyaar hore oo ka timid qarniyo ka hor, kana timid qaaradda Afrika. Aad bay u fudud tahay, qof walbana wuu ciyaari karaa. Waa inaad ka saartaa baloogyada alwaax ee munaaradda iyadoon soo dhicin. Fikradda ayaa ah in laga tago munaaradda iyada oo aan dheellitirneyn inta suurtogalka ah si marka ay noqoto mid ka soo horjeeda, uu u dumo. Ku alla kii googoosyada ridaa wuu khasaaray.
Ciyaaraha la soo ururiyay
Ma ku caajistay hal ciyaar? Ma safar badan ayaad qabtaa oo ma qaadan kartaa dhammaan ciyaaraha aad haysato? Xulashada ugu fiican ayaa ah inaad iibsatid xirmadan 400-gabo ee ciyaarta la isku daray. Waxa ku jira buug leh tilmaamo qof kasta leh. Waxaa ka mid ah boqolaalkaas ciyaarood qaarkood sida shaxanka, ciyaaraha kaadhka, laadhuu, dominoes, checkers, Parcheesi, iwm.
Iibso Ciyaaraha Isku-xidhan
Haddii aad tahay taageere ka mid ah Taxanaha TV-ga, ciyaaraha fiidyaha, ama filimada Aflaanta ugu guulaha badan, waxaa jira ciyaaro mowduucyo ah oo iyaga ku saabsan oo aad aad u xiiseyso:
Dabaqa Dragon Ball
Taageerayaasha Dragon Ball anime ayaa aad ula dhacsan doona ciyaarta kaadhkan oo ay ku jiraan jilayaasha taxanaha caanka ah ee DBZ. Kaliya ku tuur kaadhkaaga oo isku day inaad garaacdo kan kaa soo horjeeda, iyadoo loo eegayo awoodaha mid kasta ...
Iibso Dabaqadda DBZ
Doomka Ciyaaraha Duulimaadka ee Fantasy...
Doomku waa mid ka mid ah ciyaaraha fiidyaha ee ugu caansan taariikhda. Hadda waxa kale oo ay timaaddaa guddiga ciyaarta guddigan kaas oo ciyaaryahan kastaa uu noqon doono badeed hubaysan si uu isugu dayo inuu la dagaallamo daanyeerka ugu badan ee aad qiyaasi karto.
Soo iibso Doom
Ciyaarta carshiyada ciyaarta guddiga
Ciyaarta Thrones - The ...
Haddii aad soo jiidatay taxanaha caanka ah ee HBO, markaa waxaad sidoo kale jeclaan doontaa ciyaarta boodhka ee mawduuca Game of Thrones. Ciyaaryahan kastaa waxa uu maamulaa mid ka mid ah Guryaha Waaweyn, waana in ay adeegsadaan dhagartooda iyo kartidooda si ay u maamulaan guryaha kale. Iyo dhammaan kuwa leh jilayaasha ugu astaanta badan taxanaha.
Iibso Game of Thrones
Hasbro Ciyaarta Nolosha -...
Magaalada iyo jilayaasha taxanaha caanka ah ee caanka ah ayaa halkan nolol ku yimid, guddigan madadaalada ah halkaas oo aad naftaada ku dhex milmi doonto nolosha jaalahan quruxda badan.
Waxyaalihii Dhintay ee Soconaya
Daba-galka aan yarayn ee...
Raadinta Caadiga ah ee caadiga ah iyo kuwa caadiga ah, oo leh jiiskeeda, tileskeeda, boodhkeeda, kaararkeeda su'aalo ... Laakiin kala duwanaansho, taasina waa in ay dhiirigeliso taxanaha caanka ah ee zombies.
Iibso Trivial TWD
Dhismaha Indiana Jones Tower
Hasbro Tower of...
Adventure iyo magaca xirfadda, oo lagu dejiyay filimada Indiana Jones, oo leh Temple of Akator goobta. Qaab lagu xuso filimkan oo ka mid ahaa lacagaha ugu badan ee soo xareeyo waqtigiisa.
Iibso La Torre
Noris - Ciyaartu waa Jarmal
Ciyaar ciyaar, sidoo kale Jumanji. Filimka caanka ah ee ku saabsan ciyaarta looxa hadda wuxuu sidoo kale ku yimaadaa qaabka Qolka Baxsashada ee qoyska oo dhan. Soo ogow siraha oo ka bax kaymahan adigoo nool, haddii aad awooddo ...
Xafladda & Shirkadda Disney
In badan oo la mid ah, Xisbiga caadiga ah & Co., oo leh imtixaanno badan oo isku mid ah, su'aalo iyo jawaabo, sawir, halxiraale, iwm. Laakiin dhammaantood waxay wataan mawduuca jilayaasha khayaaliga ah ee Disney ugu caansan.
Iibso Xisbiga Disney
Dhibaatada - Masterchef, Ciyaarta ...
Barnaamijka karinta ee TVE wuxuu kaloo leeyahay ciyaar. La ciyaar qoyska oo dhan guddigan lagu dejiyay Masterchef iyo su'aalo ku saleysan barnaamijka si loo gaaro yoolka.
Haddii aad jeceshay sheekada Jurassic Park oo aad tahay taageere dinosaurs, waxaad jeclaan doontaa ciyaarta guddigan rasmiga ah ee filimka Jurassic World. Ciyaaryahan kastaa waa inuu qaataa door, si uu u qodo oo u ogaado fossils, ka shaqeeyo shaybaarka DNA-da dinosaurs, u dhiso baqashada dinosaurs oo uu maamulo beerta.
Iibso Adduunka Jurassic
Taxanaha Isbaanishka ee La casa de papel wuxuu xaaqay Netflix, wuxuuna isu dhigay mid ka mid ah kuwa loogu daawashada badan yahay dhowr waddan oo adduunka ah. Haddii aad tahay mid ka mid ah taageerayaashiisa, ciyaarta guddigan lagama maqnaan karo sheekadaada. Loox leh taayirro aad qoys ahaan ugu ciyaari karto tuugo iyo lahaysteyaal.
Space Cowboys Kale
Caalamka Marvel iyo Avengers waxay ku yimaadeen ciyaaraha guddiga. Ciyaartan waxaad u baahan doontaa inaad ururiso koox geesiyaal ah oo aad isku daydo inaad ka hortagto Thanos inuu burburiyo meeraha. Si tan loo sameeyo, Gems-ka Infinity ee ku kala firirsan caalamka kala duwan waa in la helaa.
Soo iibso Quruxda
Kow iyo Toban Force Cluedo ayaa...
Wali waa Cluedo qadiimi ah, oo leh dhaqdhaqaaq isku mid ah iyo habka ciyaarta. Laakin iyada oo wadata dulucda taxanaha caanka ah Aragtida Bangi Weyn.
Iibso The Big Bang Theory
Midka soo ifbaxaya
Midka soo baxa. Abba...
Taxanaha telefishinka Isbaanishka La que se avecina hadda wuxuu leeyahay ciyaar rasmi ah. Ku ciyaar dhismaha caanka ah ee Montepinar iyo jilayaashiisa. Waxay ku habboon tahay 8 sano, waxayna ciyaari kartaa ilaa 12 qof. Ciyaarta waxa loo soo jeedinayaa bulshada, ciyaaryahan kastaana waxa uu go'aansadaa in uu codeeyo iyo in kale.
Harry Potter wax yar
Daba-gal aan yarayn - Harry...
Sheekada Harry Potter waxay dhiirigelisay filimada, taxanaha, ciyaaraha fiidyaha, iyo sidoo kale ciyaaraha looxa. Haddii aad jeceshahay buugaagtiisa, hadda waxaad sidoo kale heli kartaa kumanaan su'aalo ah oo ku saabsan jilayaashiisa iyo sheekada sixirka ee ugu caansan qarnigii XNUMXaad ee Trivia.
Iibso HP Trivial
KOW iyo KOWAAN CIIDAMO fudud oo buuxa...
The Hobbit iyo Lord of the rings ayaa ka mid ahaa buugaagta ugu guulaha badan ee loo raray shaleemada. Hadda waxay sidoo kale dhiiri galiyeen vieogames iyo, dabcan, ciyaaraha looxa sida Trivial kan oo kale ah. Ciyaarta qadiimiga ah ee fudud ayaa hadda loo soo labbistay mawduucan faneedka dhexe ee dhexe.
Iibso Trivia Lord of the ring
Xoogga iyo dhinaca mugdiga ah hadda waxay la yimaadaan miiskaaga ciyaartan oo ku salaysan sheeko-yaqaannada sayniska ee caanka ah. Ciyaar loogu talagalay 2 ciyaartoy, laga bilaabo 14 sano jir, oo aad la kulmi karto dagaalladii halyeeyada ahaa ee u dhexeeya Jedi iyo Sith. Hogaami ciidamadaaga sawiradan yar yar ee sawiran ee ay ka muuqato jilayaal khuraafaad ah.
Iibso Star Wars Legion
Dune Madadaalada Edge ...
Laga soo bilaabo buugaagta waxay tageen ciyaarta fiidiyowga iyo filimka. Dune wuxuu dhawaan ku soo laabtay tiyaatarada isagoo wata nooc cusub. Hagaag, waxaad sidoo kale ciyaari kartaa ciyaarta guddiga istiraatijiyad cajiib ah. Iyada oo dhinacyada waaweyni ay is horfadhiyaan, oo leh meeraha caanka ah ee lamadegaanka iyo lamadegaanka, iyo wax kasta oo aad ka filanayso Dune.
Ciyaaraha guddiga istiraatiijiyadda
oo dhan kuwa leh nafta istiraatijiyadeed oo jecel ciyaaraha dagaalka, Qabso Calanka (CTF), iyo wixii la mid ah, waxay ku raaxaysan doonaan markay carruur yihiin ciyaaraha istiraatijiyadda soo socota:
ERA qarniyadii dhexe
ERA qarniyadii dhexe -...
ERA waxay ku geyneysaa Spain dhexe, ciyaar istiraatijiyad leh 130 yar, 36 laadhuu, 4 loox, 25 biin, 5 calamadaha, iyo 1 blog ee buundooyinka. Habka dib loogu soo nooleeyo taariikhda Isbaanishka ee leh magacan weyn.
Waa ciyaarta istaraatijiyad heer sare ah, mid ka mid ah kuwa ugu iibinta badan iyo abaalmarinta, oo leh 2 milyan oo ciyaartoy adduunka oo dhan ah. Waxay ku salaysan tahay jasiiradda Catan, halkaas oo dadka deggan ay yimaadeen si ay u abuuraan tuulooyinkii ugu horreeyay. Ciyaaryahan kastaa wuxuu yeelan doonaa kiisa, waana inuu horumariyaa magaalooyinkan si uu uga dhigo magaalooyin. Taas awgeed waxaad u baahan tahay ilo, samee isbahaysi ganacsi, oo is difaac.
Tani waa mid ka mid ah ciyaaraha guddiga istiraatijiyadeed ee ugu fiican. Waxay ku saleysan tahay xilligii Dagaalada Twilight-ka-dib, Races-kii weynaa ee Boqortooyadii Lazax ee hore waxay aadeen adduunkoodii hooyo, hadda waxaa jirta xasillooni jilicsan. Guud ahaan galaxyada ayaa mar kale kicin doona dagaal lagu soo ceshanayo carshiga. Qofkii hela cudud ciidan iyo maamul ka caqli badan ayaa noqon doona mid nasiib badan.
Iibso Twilight Imperium
A classic of dagaalka iyo ciyaaraha xeeladaha. Loox aad ku weerarto oo aad si xeeladaysan iskaga difaacdo, si aad calanka cadowga ula wareegto ciidankaaga 40 xabo oo darajooyin kala duwan leh.
Khatarta Caadiga ah
Ciyaarta Hasbro- Khatar
Ciyaartan ayaa ka mid ah kuwa ugu caansan noocaan. Iyada oo ay tahay inaad dejiso istiraatiijiyad aad ku maamusho adduunka. Iyadoo 300 oo tirooyin la cusboonaysiiyay, hawlgalo kaarar leh, iyo naqshad aad u taxadar badan. Ciyaartoyda waa in ay abuuraan ciidan, ka dhaqaaqaan ciidamada khariidada oo ay dagaalamaan. Iyada oo ku xidhan natiijada laadhuudhka, ciyaartoygu wuu guulaysan doonaa ama waayi doonaa.
Maxaa dhacaya haddii dhammaan xumaan-falayaasha Disney ay isugu yimaadaan ciyaar si ay u dejiyaan qorshe Machiavellian? Dooro dabeecadda aad jeceshahay oo soo ogow awoodaha gaarka ah ee uu leeyahay. Samee istaraatiijiyada ugu fiican mid kasta oo ka mid ah wareegyada iskuna day inaad guuleysato.
Soo iibso Villainous
Ciyaaraha Lookout 22160028 -...
Laga soo bilaabo Uwe Rosenberg, xirmadan waxaa ka mid ah 9 loox ciyaarta laba-geesoodka ah, 138 dhagxaan walxaha, 36 stamps nafaqeynta, 54 dhagaxyo xayawaan ah, 25 dhagxaan qof ah, 75 dayrar, 20 saldhigyo, 24 calaamado qol, 33 guri oo waddan ah, 3 foorno martida, 9 isku dhufasho tiles, 1 blocks, 1 gooldhagax bilowga ah, 360 kaarar, iyo buug-gacmeedka. Wax faahfaahin ah kama maqna si aad u dhisto oo aad u maamusho beertaada dhexe oo aad ku horumarin karto beeraha iyo xoolaha si aad ula dagaallanto gaajada ...
Daabcaaddii Qarniga ee Dagaalkii Wayn
Damn Games The Great...
Waxaa hubaal ah in ciwaanka The Great War, ama The Great War, ee Richar Borg uu yahay mid aad taqaan. Waa isla naqshadeeye sida Memoir 44 iyo Battlelore. Waxay ku salaysan tahay dagaalladii Dagaalkii Adduunka ee XNUMXaad, taasoo u oggolaanaysa ciyaartoydu inay dhinac ka noqdaan oo ay dib u soo celiyaan dagaalladii taariikhiga ahaa ee ka dhacay dhufeysyada iyo goobaha dagaalka. Ciyaar aad u dabacsan oo leh kaararka dhaqdhaqaaqa iyo laadhuuda xaliya dagaalada.
Maalmo yaab leh 7301...
Isla qoraaga, kan kale waa mid ka mid ah ciyaaraha istiraatijiyadda dagaalka ugu fiican oo aad iibsan karto. Deji waqtigan Dagaalkii Labaad ee Adduunka, oo leh balaadhin suurtagal ah iyo xaalado kala duwan si loo ballaariyo nuxurka. Haddii aad jeceshahay istiraatiijiyad militari iyo taariikhda, waxay kugu habboonaan doontaa sida gacan-gashi. Inkastoo ay xoogaa dhib badan tahay...
Imhotep: Dhismihii Masar
Devir - Imhotep, oo ah ...
Dib ugu soo noqo wakhtiga Masar hore. Imhotep wuxuu ahaa dhisihii ugu horreeyay uguna caansanaa waqtigaas. Hadda ciyaarta guddigan waxaad isku dayi kartaa inaad la mid noqoto guulahoodii adigoo kor u qaadaya taallooyin iyo qorshooyin adiga kuu gaar ah si aad uga ilaaliso kuwa kaa soo horjeeda inay guuleystaan.
La dagaallama si aad u noqoto Master Builder ee soo socda ee boqortooyada. La cajab dadka sharafta leh xirfadahaaga horumarineed ee magaalada oo ka caawi jilayaal kala duwan ciyaartan istiraatijiyadda. Waxaad haysataa 8 kaarar oo xarfo ah oo xidhmada ku jira oo aad kala dooran karto, 68 kaadhadh degmo, 7 kaadhadh caawimo ah, 1 calaamad taaj ah, iyo 30 calaamadood oo qadaadiic ah.
Online iyo bilaash
Waxa kale oo aad leedahay tiro badan oo ciyaaraha guddiga online, si ciyaar bilaash ah keligiis ama kuwa kale oo fog, iyo sidoo kale apps for mobile phones in ay ku raaxaystaan ​​iyada oo aan si shakhsi ah (in kasta oo ay tani hubaal ka qaadaysaa qaar ka mid ah soo jiidashada, iyo qiimaha iftiinka ... Ciyaarta jidheed leh:
Goobaha ciyaaraha bilaashka ah
Bal qiyaas cidda
Apps ee aaladaha mobilada
Waxaad ka raadin kartaa dukaanka Google Play Qalabkaaga moobilka ama dusha Dukaanka Apple App, iyadoo ku xiran nidaamka hawlgalka aad leedahay, cinwaanada soo socda:
Catan Classic ee iOS iyo Android.
Bakhtiga loogu talagalay Android
Monopoly ee iOS iyo Android
Scrabble ee iOS iyo Android
Sawirka IOS iyo Android
Chess ee iOS iyo Android
Ciyaarta Goose ee macruufka iyo Android
Waxa kale oo jira laba qaybood oo ciyaaraha guddiga ah, in kasta oo lagu dari karo qayb ka mid ah qaybihii hore, iyagu waxay samaystaan ​​qayb madaxbannaan. Intaa waxaa dheer, kuwaas oo gaaray a guul aan naxariis lahayn, waxayna leeyihiin taageerayaal aad iyo aad u badan oo qaababkan ah:
Ciyaaraha guddiga Baxsashada Qolka
Qolalka Baxsashadu waxay noqdeen kuwo la moodo oo waxay soo galeen dhammaan dhulka Isbaanishka. Waxay horeyba u yihiin mid ka mid ah hiwaayadaha ugu jecel dalal badan, maadaama ay kuu ogolaaneyso inaad la shaqeyso asxaabta ama qoyska oo aad xalliso xujooyinka. Intaa waxaa dheer, waxay leeyihiin dhammaan noocyada mawduucyada, si ay u qanciyaan dhammaan dhadhanka (figrad sayniska, cabsida, taariikhda, ...). Qaybo cajiib ah oo Covid-19 dartiis ay leeyihiin xannibaado halis ah. Si aad uga gudubto xaddidaadahaas, waa inaad eegtaa cinwaanada Qolka Baxsashada ugu fiican inuu ku ciyaaro guriga.
Arag ciyaaraha looxa ugu fiican Qolka Baxsashada
Mid kale oo ka mid ah ifafaale ballaaran oo kasbanaya taageerayaashu waa doorka ciyaarta. Aad bay u qabatimaan, waxaana sidoo kale jira noocyo badan oo iyaga ka mid ah, oo leh mawduucyo badan. Ciyaarahani waxay kugu quusinayaan door, dabeecad ay tahay inaad ciyaarto inta ciyaarta lagu jiro si aad u gaadho ujeedooyinka.
Eeg ciyaaraha guddiga door-ciyaareedka ugu fiican
Sida loo doorto ciyaarta guddiga ugu fiican
Waqtiga dooro ciyaaraha guddiga ku haboon furayaasha qaar waa in xisaabta lagu darsado. Tixgelintan ayaa kaa caawin doona inaad had iyo jeer sameyso iibsashada saxda ah:
Tirada ciyaartoyda: waxaa muhiim ah in lagu xisaabtamo tirada ciyaartoyda ka qeyb galeysa. Waxaa jira 2 qof oo keliya, kuwa kale oo dhowr qof ah, iyo xitaa kooxo ama kooxo leh. Haddii ay yihiin lammaane ama laba, maahan mid ku habboon, sababtoo ah ku dhawaad ​​dhammaantood waxaa lagu ciyaari karaa laba qof oo keliya. Dhanka kale, haddii ay yihiin kulannada asxaabta ama ciyaaraha guddiga qoyska, tani waxay noqonaysaa muhiim.
Da ': waa muhiim in la xaqiijiyo da'da ciyaarta lagu taliyay. Waxaa jira ciyaaro badan oo loogu talagalay qof walba laga bilaabo carruurta ilaa waayeelka, si ay ugu fiican yihiin inay u ciyaaraan qoys ahaan. Taa beddelkeeda, qaar marka laga eego nuxur ahaan waxay gaar u yihiin kuwa aan qaan-gaarin ama dadka waaweyn.
Diiradda: ciyaaraha qaarkood waa in lagu wanaajiyo xusuusta, kuwa kalena kor loogu qaado macquulnimada, xirfadaha bulshada, kor u qaadida shaqada iskaashiga, ama xirfadaha dhaqdhaqaaqa, iyo xitaa waxbarashada. La'aanteed waa kuwa aan qaan-gaarin, tani sidoo kale waa muhiim, tan ugu habboon waa in lagu doortaa baahida ilmaha.
Mawduuca ama qaybtaSida aad aragteen, waxaa jira dhowr nooc oo ciyaaraha looxa. Qof kastaa ma jecla qof kasta, markaa waa muhiim in la ogaado sida loo garto qaabka ciyaarta qayb kasta si loogu guuleysto iibsashada.
Kakanaanta iyo qalooca waxbarashada: aad bay muhiim u tahay haddii da'yar iyo weyni ay ciyaari doonaan, in kakanaanta ciyaartu aanay sarreyn, oo ay leedahay qalooc waxbarasho oo fudud. Sidan waxay awood u yeelan doonaan inay si dhaqso ah u fahmaan dhaqdhaqaaqa ciyaarta kamana lumin doonaan ama ka niyad jabi doonaan iyagoo garan la' sida loo ciyaaro.
Booska ciyaarta- Ciyaaraha looxa badan ayaa kuu oggolaanaya inaad ku ciyaarto miis kasta oo caadi ah ama dusha sare ah. Dhanka kale, kuwa kale waxay u baahan yihiin meel yar oo dheeraad ah qolka fadhiga ama qolka ciyaarta. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in si fiican loo falanqeeyo xaddidaadaha guriga oo la eego haddii ciyaarta la doortay ay si fiican ula qabsan karto deegaanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: I sii wakhti firaaqo » General » Ciyaaraha guddiga ugu fiican abid